ई-मेल - यो हामी, आफ्नो साथीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्ने फाइलहरू पठाउन एक उपयोगी संसाधन हो। "Yandex" माथि खोल्छ धेरै सम्भावनाहरू ( "Yandex मुद्रा", "ड्राइभ", "खोज", "पसल", "मौसम", "समाचार", "तस्वीर", "भिडियो"), अन्य सेवा तुलना। सबैभन्दा नयाँ प्रयोगकर्ता, यो सिद्ध र विश्वसनीय सेवा छनौट धेरै वर्ष को लागि बनाउने, यो एक प्रमुख स्थिति धारण।
मेल जस्तै, "Yandex" आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्न?
जब ई-मेल दर्ता, अधिकांश मानिसहरू carelessly लगइन को चयन बुझाउँछ। तिनीहरूले यो लगभग परिवर्तन गर्न असम्भव छ भन्ने विचार छैन। तपाईंको मेलबक्स गर्न लगिन तपाईं ई-मेल को लागि विनियोजन गरेको छु कि ठेगाना प्रर्दशन गर्दछ। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति एक घर वा अपार्टमेन्ट एक विशेष सडक मा स्थित छ बाँचिरहेका। नागरिक ठेगाना देखिन्छ। अन्यथा यो बनाउन हामीले अर्को अपार्टमेन्ट उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। मेलबक्स परिवर्तन गर्न तिनीहरूलाई नै छ संग, तपाईं एक नयाँ इमेल दर्ता गर्न आवश्यक छ।
प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन विशेषताहरु
म मेल मा, "Yandex" लगइन नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? यो फरक ठेगाना प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ केही प्रणाली मध्ये एक छ, तर त्यहाँ त सरल छैन। मेल जस्तै, "Yandex" आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्न? यो प्रणालीमा पनि, नयाँ ई-मेल खाता दर्ता गर्न आवश्यक हुनेछ, तर यो पुरानो पत्र र सही सम्पर्क सार्न सम्भव छ।
लग इन अल्गोरिदम परिवर्तन
कसरी "Yandex" मा लग इन इमेल परिवर्तन गर्न? यो तपाईँले इन्टरनेट आवश्यकता हो, र आवश्यक डाटा (लगइन र पासवर्ड) मेलबक्स पहुँच।
यस्तो Mail.ru को रूपमा तपाईं ई-मेल सिर्जना गर्न अनुमति धेरै सेवाहरू, "Rambler" र जीमेल, तपाईं लगइन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। पोस्ट मा "Yandex" अल्गोरिदम प्रतिस्थापन अन्य प्रणाली पनि त्यस्तै कार्यहरू भिन्न हुन्छ। केवल एक नयाँ इमेल खातामा यो सेवा, तपाईंले सही सम्पर्क र पुरानो पत्र हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
"Yandex" आफ्नो मेलबक्स को बाहिर प्राप्त र नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस्। मा क्लिक गर्न आवश्यक हुनेछ यो गर्न "आफ्नो मेलबक्स सिर्जना गर्नुहोस्," त्यो पृष्ठको बायाँ छेउमा छ। भर्खरै सिर्जना इमेल खातामा गर्नाले, तपाईं यसलाई खाली छ कि पत्ता लगाउन हुनेछ। र मेल मा, "Yandex" आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्न कसरी? नयाँ खाता मा, "पुरानो मेल बक्स कलेक्टर देखि।" सक्षम अर्को तपाईं पुरानो खातामा छन् अक्षरहरू पहुँच बढाउनका लागि मोड्युल कन्फिगर गर्न आवश्यक छ।
अब तपाईं मोड्युल कन्फिगर गर्न आवश्यक छ। तपाईं ध्यान दिएर सबै सिफारिसहरू पालन भने, जटिल केही छ। नयाँ खाता पृष्ठ को शीर्ष मा तपाईं फेला छौँ "सेटिङ" बटन जाने गर्नुपर्छ। मा नयाँ ट्याब, "अन्य बक्से बाट मेल को संग्रह" दोस्रो बिन्दु, जो भनिन्छ पत्ता लगाउन र यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम कसरी परिवर्तन गर्ने? मा "Yandex" -almost तपाईं पृष्ठ तपाईं पुरानो बाट नाम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्न, र त्यसपछि बटनमा क्लिक गर्नुहोस् छन् जहाँ, खोल्छ "सेट अप।" लिङ्क गर्दा स्थानान्तरण सम्पर्क, पुरानो पत्र विशेष चिह्न, सुरक्षा पत्र मूलहरू को जिम्मेवारी: तपाईं जहाँ तपाईं निम्न मापदण्ड मेलबक्स को संग्रह कन्फिगर गर्न आवश्यक एक पृष्ठमा जानुहोस्। अझै पनि यो तपाईं आफ्नो पुरानो इमेल सार्न जसमा एक फोल्डर सिर्जना गर्न सम्भव छ। चरणहरू पूरा गरेपछि आफ्नो पुरानो खाता छ, तर नयाँ लगिनमा। आवश्यक छ भने, यो कार्य असक्षम गर्न सकिदैन। तपाईं थपियो परिवर्तनहरू बन्द गर्न आवश्यक छ भने, "मेल को संग्रह" अर्को आफ्नो मेलबक्स जाने र क्लिक गर्नुहोस् "बन्द।"।
एक लग इन समान सेवाहरूमा अल्गोरिदम परिवर्तन
Google बाट इमेल मा पनि "Yandex" जस्तै, बक्स को ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ। पृष्ठ को यो शीर्ष लागि एउटा नयाँ खाता सिर्जना गरेर लग इन परिवर्तन, बटन "Register" मा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईं दर्ता तपाईं स्थानान्तरण गर्न, पासवर्ड चाहनुहुन्छ कि मेलबक्स, र तपाईं आवश्यक जानकारी को ठेगाना प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं नयाँ ई-मेल दर्ता गर्दा, आफ्नो पुरानो खातामा जाने र दर्ता तपाईं निर्दिष्ट कि डाटा पुष्टि गर्नुहोस्। तपाईंले सही गर्दछ भर्न भने डाटा पुष्टि गर्न। के यो फोन नम्बर प्रविष्ट गर्न आवश्यक हुनेछ, र जहाँ सन्देश आउँछ। तपाईं बस पुष्टि कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र "जारी" क्लिक गर्न छ।
अब तपाईं मेलबक्सहरू एक जानुहोस् र जान आवश्यक "खाता सेटिङ।" यो गर्न, यसको नाममा क्लिक गर्नुहोस् र चाहेको बटन चयन गर्नुहोस्। को "बहु इनपुट" सम्पादन वस्तुहरू अगाडि निशान राख्दै तपाईंलाई चाहिने मा।
परिवर्तनहरू बचत गर्न, मेल बाहिर निस्कन र फेरि जानुहोस्। निश्चित सबै काम गरिरहेको छ, यसको नाममा क्लिक गर्नुहोस् र चयन बटन "अर्को खातामा साइन इन गर्नुहोस्।" त्यसैले तपाईं effortlessly खाताहरू बीच स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईं प्रश्न, "कसरी मेल Yandex परिवर्तन लग इन मा?" जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। के तपाईं साँच्चै यो आवश्यक छ भने, प्रस्तावित अल्गोरिदम प्रयोग गर्नुहोस्। यस्तै सेवाहरूमा लगइन परिवर्तन गर्न, यसलाई नयाँ ई-मेल सिर्जना गर्न पनि आवश्यक छ। को Mail.ru वा "Rambler" प्रतिस्थापन एल्गोरिदम अलिकति फरक हुन सक्छ। तपाईं अब बक्स ठेगाना परिवर्तन गर्न आवश्यक गर्न, एकचोटि, संक्षिप्त स्मरणीय र सुन्दर लग इन लाग्छ।
चमेरो सेट! Yandex लागि: एक विस्तृत पुस्तिका
ई-मेल कसरी लेख्न? पाठ, ई-मेल ठेगाना
यास्मीन बोडरम Resort5* (बोडरम, टर्की): होटल को विवरण र समीक्षाहरू
अभिनेताहरु राम्रो श्रृंखला: "मा होल्ड, चार्ली!"
Vibroplast m1 पूरा
Vorontsov ponds: विगत र वर्तमान